ဘန်ကောက်ခရီးသွာ ဝန်ဆောင်မှု , Bangkok (2021)
မဂၤလာပါရွင္ က်မတို Travel Agent မွရနိုင္ေသာ Services မွာ
	Air Tickets
	Show Tickets
	Dinner Ticketsမ်ားအားလံုးရပါျပီးရ
ဘန္ေကာက္ ခရီးသြား ၀န္ေဆာင္မွဳ - ဥမၼာ ကို ယံု
ၾကည္စိတ္ခ်စြာ ျဖင့္ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ
🎈အသက် 18နှစ် မပြည့်သေးတဲ့အရွယ်
( ၁၉ ) ယောက်၊
🎈မိန်းကလေး ( ၁၆ ) ယောက်အပါအဝင်
စုစုပေါင်း ( ၂၆၄ ) ယောက် ကျဆုံးပြီး။
🎈ရန်ကုန်တိုင်း = 136 ယောက် (51.52%)
🎈မန္တလေးတိုင်း = 51 ယောက် (19.32%)
🎈စစ်ကိုင်းတိုင်း = 19 ယောက် (7.2%)
🎈မကွေးတိုင်း = 16 ယောက် ( 6.06% )
🎈ပဲခူးတိုင်း = 12 ယောက် ( 4.5% )
🎈တနသ်ာရီတိုင်း =9ယောက် ( 3.41% )
🎈ရှမ်းပြည်နယ် = 8 ယောက် ( 3% )
🎈ဧရာဝတီတိုင်း =4ယောက် ( 1.52% )
🎈မွန်ပြည်နယ် =4ယောက် ( 1.52%)
🎈ကချင်ပြည်နယ်=3ယောက် ( 1.14% )
🎈ကယားပြည်နယ်= 1ယောက် ( 0.4% )
🎈နေပြည်တော် = 1 ယောက် ( 0.4% )
🤷🏻‍♂️ရဲ နဲ့ စစ်သားတွေ ၊ SP တွေအပေါ်
အမြင်ကြည်လိုက်တော့မယ်။ ...လို့ တွေးမိတိုင်း
စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုး ကို အမြတ်ဖြုတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပေးရင်း အသက်ပေးလိုက်ရသော -
“ ဒီ နွေဦးတော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းတွေကို
သတိရလိုက်စမ်းပါ ....... “
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ဝူဟန်ကြောင့် ခရီးသွား
မရ နှစ်ချီနေပြီးမို့ ခရီးစဉ်လေးတွေကိုလွမ်း
ဝူဟန်ကြောင့် တစ်ချို့နိုင်ငံတွေကို ခရီးသွား
လည်း စီစဉ်ပေးအုံးမှာနော် 🥰🥰🥰
1)Bangkok to Pattaya
2)Bangkok to Hua Hin
3)Bangkok to kancanaburi
4)Bangkok to Khao Yai
1)ဘန်ကောက် - ပတ္တရား
ဘန်ကောက်ဝင်ကြေးလက်မှတ်များသာအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဲလေးတွေ ဒီမှာနော်🙏🙏🙏
ဘန်ကောက် - ပတ္တရား - ဟွာဟင်အပြင်
သီးသန့်တစ်နေရာထဲ အသက်သာဆုံး ဈေးနဲ့ ရောင်းပေးနေပါပြီနော် ..ရရှိိနိုင်မယ့်
Dream world+ buffet+ Snow 570Baht
Dream world+ buffet+ water park(1hr) 550Baht
Dream world buffet+ show+ Water Park 635Baht
Art in paradise Bkk 250baht
Safari + Marine park + buffet Lunch 950 baht
Sea life (Ocean World) 630baht
Sea life + 4D Movie 820baht
Sea life+ Glass Buttom Boat 920baht
Madame Tussuards + 4D 570baht
Sealife Ocean World + Madame Tussuards + 4D 950Baht
Baiyoke sky buffet dinner (76 or 78 ) 700baht
Baiyoke sky buffet lunch 600baht
Calypso lady boy show bkk entrance only 570baht
Calypso lady boy show bkk+ dinner 570baht
Kidzenia bkk Adult (over 15years) 650 baht
Kidzenia bkk (4-14 year old) 950 baht
Kidzenia bkk (2-3 year old ) 650 baht
Mahanakhorn skywalk indoor+rooftop 760 baht
Siam Niramit Show only 720baht
Siam Niramit Show + dinner 870 baht
Siam park Ride + Buffet Lunch 560baht
Chao phraya Princess dinner Cruise 960 baht
White Orchid Dinner Cruise 870baht
Alcazar Show normal seat 440baht
Alcazar show VIP 540baht
Cartoon network Waterpark 1000baht
Dolphin world 320baht
Frost Magical Ice of Siam 390baht
Kaan show pattya standard 600baht
Kann show pattya VIP (star zone) 750 baht
Nong Nooch Garden (ticket only) 430baht
Nong Nooch Garden + Thai buffet lunch 600baht
Nong Nooch Garden + International buffer Lunch 850Baht
Silver Lake Vineyard photo shooting points + Grape juice Plant + 1 Grape juice 300baht
Teddy bear 320baht
Tiger Zoo 250 baht
Underwater world pattaya 345baht
Hua Hin 🏖👙
Santorini park 200 baht
Venezia + all activities + meal 620 baht
ကမ္ဘာ့အလှဆုံး ကမ်းခြေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဖူးခက် ကမ်းခြေရဲ့ ၀င်ကြေးလက်မှတ်တွေလဲ ရသေးတယ်နော် 😍😍😍
Phi Phi Island +Big boat + lunch (Gold Seat) 1600baht
Phi Phi Island +Maya Bay + Khai Nok Island+speed boat+lunch 1800baht
James Bond + Big boat +lunch+Phang-Nga Bay + National park 1800baht
ဘန်ကောက်အတွက်ဆိုရင် One Stop Service နဲ့ အားလုံး ok သွားအောင် ကျွန်မတို့ Ohnmar Travels & Tours ကို ဖုန်းလေးဆက်လိုက်ရုံပါဘဲ 📞📞📞
Cb Message or iD Line
မနက်ဖြန် ကမ္ဘာ့အကြီး ဆုံးဆန္ဒပြပွဲ မှာ
လူမျိုးတွေ ကို ကျမ ကူညီပေးလို ပါတယ်ရှင်
တစ်ချို့ UN ရုံးရှေ့သို့ သွားမတက်တာ ရယ်
သူတွေကို ကား Free သွားရောက်ကြိုပေးပါမယ်နော်
မှတ်ချက် လူတော့ စုရပ်လုပ်ပေးရပါမယ်နော်
ကမ္ဘာအကြီးဆုံး ဆန္ဒ ပြပွဲ ကျင်းပမည်
၂၈၊ ၂၊ ၂၀၂၁မှာ မြန်မာ ထိုင်း ဟောင်ကောင် အိန္ဒိယ ထိုင်ဝမ် အင်ဒိုနီးရှား စတဲ့ နိုင်ငံသားတွေပါ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဆန္ဒပြကြမှာပါ။ #MilkTeaAlliance လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲဖြစ်လာပါမယ်။
#Fightingပါ။ထုံးစံအတိုင်း ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး Anonymous ကစတင်လှုံ့ဆော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချည်းပဲ မဟုတ်တော့ပါဘူး။မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးက ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါတခုလို အလျှင်အမြန်ကို ပျံ့နှံကူးစက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေ တသားတည်း တပုံစံထဲ ဖြစ်လာနေပါပြီ။တခုပြောချင်တာက ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့မော်ဒယ် ပုံစံတွေက သူတို့ဆီက ကျွန်တော်တို့ ကူးယူရတာရှိသလို ကျွန်တော်တို့ဆီက သူတို့ပြန်ကူးယူနေကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ အားလုံးရဲ့ သဘောထားက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေ မတရားဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကို တွန်းလှန်နေကြရတာပါပဲ။အဲဒီတော့ 28.2.2021 ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံတင်မဟုတ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေပါ ပါဝင်လာပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
လူများများသိအောင် share ခြင်း copy လုပ်ခြင်းဖြင့် ကူညီပေးကြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒါလေးတွေ မရှိသေးတဲ့သူတွေ ယူထားပါ
ရှိပြီးသူလည်း ရှယ် ဖြင့်ကူညီပေးပါ ....
မြန်မာပြည် Internment လိုင်တွေ ဖြတ်တောက်
လိုက်ရင် အလွယ်တစ်ကူ ဆက်သွယ်လို့ရအောင်ပါ
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သူများ စစ်တပ်ရဲ့ မတရား အာဏာသိမ်းမှုကို ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်း UN ရုံးကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးအပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်း...✊✊✊
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ထိုင်းရောက် မြန်မာဒီမိုကရေ
စီ အင်အားစုတွေက ယနေ့မနက် ထိုင်းသံရုံးရှေ့တွင်း ဆန္ဒထုပ်ပြခဲ့ကြပါတယ်1-2-2021 (တနင်္လာနေ့)
OM Cargo🚙🚙🚙 မဂ်လာပါရှင့်.....
ကျွန်မတို့ OM Cargo သည် Bangkok မှ မြန်မာပြည်သို့ ပစ္စည်းများကို တိကျမြန်ဆန်ပြီး စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပီရှင့်......
🚛အပတ်စဥ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့ စနေနေ့တိုင်း တစ်ပတ်ကို 2ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ပို့ပေးပါသည်
တစ်ခါတစ်လေ ပစ္စည်းများရင် များသလိုနေ့
🚛ကြာချိန်ကတော့ ပစ္စည်းပို့ပြီး ၃-၄ ရက်အတွင်း အမြန်နှုန်းနဲ့ ပို့ပေးပါသည်
🚛1Kg ကို 2000 ks ယူပါသည်
🚛50 Kg အထက်ဆိုရင်တော့ အိမ်တိုင်အရောက်ပို့ပေးတဲ့အပြင် 1Kg ကို 1800 ဘဲကျပါမယ်ရှင့်.....
🚛အနည်းဆုံး 5Kg မှစပြီး လက်ခံပါသည်
🚛5Kg မပြည့်ရင်တော့ 10000 ks ပေးရပါမယ်ရှင့်....
🚛အထုပ် Size၊ အိတ် Size ကြည့်ပြီးလဲ ယူပေးပါတယ်....
🚛လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်သည့် ပစ္စည်းများ (ဥပမာ- Air Flyer, နာရီ, ဆံပင်ကောက်စက် အစရှိတဲ့ ပစ္စည်းများကို တစ်လုံး 7000ks) ဖြင့် ယူပါသည်)
🚛 Kg နဲ့မဟုတ်ဘဲ ပစ္စည်းရဲ့အရွယ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပီးလဲ ပေးလို့ရပါတယ်
🚛အထည်၊ ဖိနပ်၊ ဘေးအိပ်၊ သားရေလည်သာ အစရှိသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ပါက ပီနံအိတ်အဖြူဆိုဒ်ကို 95000 ks ယူပါသည်...
KG နဲ့ပေးချင်ရင်လဲ ရပါတယ်.....
🚛Cosmetics က Weigh များသည့်အတွက် 1kg ကို 2000ks ဖြစ်ပြီး
50kg အထက် 1800ks ဖြစ်ပါသည်
ဘန်ကောက်မြို့တွင်း ပစ္စည်းများကို အိမ်အရောက် သွားရောက်ယူဆောင်ပေးတဲ့စနစ်!!!!!!!!
🤵အနည်းဆုံး 20-30-40- 50 Kg ယူပေးနေပါပြီးနော်-
🇹🇭 ဟွေ့ခွမ် ( Huai Khwang)
🇹🇭ဘိုဘေး (Bo Bae)
🇹🇭လဖောင်း (Lat Phrao)
🇹🇭စံဖိန်း (sam Peng)
အစရှိတဲ့ မြို့နယ်များကို ယူဆောင်ပေးပါသည်
🤵သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများမဟုတ်ပါက နေရာ အနီးအဝေးပေါ်မူတည်ပြီး Service ခပေးရပါမည်......
OM Cargo မှ ထပ်မံရရှိနိူင်သော Serviceများ
ထိုင်းနိူင်ငံမှမြန်မာပြည်သို့ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးသော ကားစဉ်းလုံး ငှားရမ်းပေးခြင်း
🇹🇭📲 02-277-5133 (office Ph)
မနက် 9:00 AM- 5:00 PM ထိသာ
House number -950/3
Soi Pracha Uthit 1, Huay Kwang,
အမှတ် ၅၂ မြေညီထပ် / ရန်ကုန်
26 27 ကြား 82 လမ်း
Like 👍 & Shres ထားပေးကြပါအုံးနော်
2021 မှာ သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ
Covid-19 က တစ်ကျော့ပြန်ဝင်လာပီး Samutsakhon (စမုဆာခွန်ခရိုင်) မှာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကူးစက်မှုအရှိန်မြင့်တက်နေတာကြောင့် Lock down ချလိုက်ပါပီနော်......
ဒါကြောင့် (30 to 31-12-20) ထွက်ရှိမည့် ခေါင်ခေါ့(ဘုထဘေ) ခရီးစဥ်ထွက်ခွာတော့မည် မဟုတ်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်...
Covid ကို မိမိကိုယ်တိုင် ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ Mask တပ်ပါ၊ Face Shield တပ်ပါ၊ လက်ကို မကြာခဏဆေးကြောခြင်းများ ပြုလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်......
Covid ​ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးမှ ကင်းဝေးပါစေ🙏🙏🙏
မဥမ္မာ Page က မိတ်ဆွတွေ မြန်မာကကော
ထိုင်းကပါ အရမ်းမေးနေကြလို့ လင်းပေး
မြန်မာပြည် မှ ထိုင်း နိုင်ငံ
ထိုင်းနိုင်ငံ မှ မြန်မာပြည်
သို့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး Page လေးပါနော်
လိုအပ်ရင် Like & Share လေးလုပ်ထားပါရှင်
S & TCargo 👇👇👇
Brand ပစ္စည်းတွေ ဈေးချတိုင်း
ရောင်းပေးမယ့် Page လးကဒီအောက်ကပါရှင့်
ပစ္စည်းကောင်း တစ်ခုကို ဈေး ကြီးပေး
ဝယ်စရာမလိုရအောင် Like & Share
ထိုင်းဘတ်ပေး ကျပ်ယူ ချင်သလာ?
ဒီပေ့ လေးကို Like & Share လေး
All For Me 📱📲
ဆောင်ရန် ရှောရန် လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါပြီး 30-12-2020 မှ 31-12-2020
ဘုရားဖူး နှင့် လည်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့ ခေါင်ခေါ့ ခရီးစဉ်ကို ဒီလိုရာသီတွေမှာ အသွားသင့်ဆုံးမို့ ခရီးစဉ်ကို အတူလိုက်ပါလည်ပတ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်👌📸🌲 😉😉😉
🌻 ​ခေါင်ခေါ့က အရမ်းအေးတဲ့အတွက် အနွေးထည်ထူထူ၊ လက်အိတ်၊ ခြေစွပ်၊ ဦးထုပ် နဲ့ပုဝါထူထူလှလှလေးတွေ ယူဆောင်လာပါရန်.......
🌻သွားတိုက်တံ၊ သွားတိုက်ဆေး၊ Wet Tissue, Camera, ဖုန်းအားသွင်းကြိုး တွေယူဖို့ မမေ့နဲ့နော်......
🌻အရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ ခရီးသွားရာတွင် ထိုင်ခုံပြဿနာများ အငြင်းပွား ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက် ရှေ့ခုံနှစ်တန်းတွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ပေးထိုင်စေမှာဖြစ်ပြီး ကျန်ထိုင်ခုံများအတွက် အရင်ဆုံး စာရင်းပေးသွင်းသူမှစ၍ နံပါတ်စဥ်တပ်ပေးပါမည်....
🌻 Voucher တွင်ရေးထားသော နံပါတ်အလိုက် ထိုင်ရပါမည်.......
Soi 17/19, Phitburi
Baiyoke Sky Hotel အနီး
ခေါင်ခေါ့(ဘုထဘေ)2Days 1 Night
အထက်ပါ ခရီစဉ်သည်( 30 မှ 31- 12-2020)
ခေါင်ခေါ့ ခရီးစဉ်ကို ဒီလိုရာသီတွေမှာ အသွား
သင့်ဆုံးမို့ ခရီးစဉ်ကို အတူလိုက်ပါလည်ပတ်
တစ်ဦးကို - 1500฿ ဖြင့် သွားလို့ရပါပြီးနော်
ဘုရားဖူး နှင့် လည်ပတ် ခရီးစဉ်လေးပါနော်
Camp Site ပုံလေးတွေနဲ့ Instagram မှာ အရမ်း hot ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်ပြီး အလွမ်းဓာတ်ခံ ရှိတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်ထဲ မသွားသင့်ပါသော ချစ်ရတဲ့ ခေါင်ခေါ့ မြို့လေးကို အတူ လည်ပတ်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်……🙏🙏🙏
ခေါင်ခေါ့မှာရှိတဲ့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြမယ့် နေရာလေးတွေကို ကြည့်ကြရအောင် 😉😉😉
✴Khao Kho Windmill လို့ခေါ်တဲ့ လေအားကိုအသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်မီးအား ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ ၂၄နာရီပတ်လုံး လည်ပတ်နေပါသော Windmill ပန်ကာအကြီးကြီးတွေကို သွားရောက်လေ့လာကြမယ်
✴Wat Pha Son Khaew လို့ခေါ်ဆိုကြသော ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အလှဆုံး သပ္ပယ်လှတဲ့ ဘုရားကျောင်းမှာ သွားရောက်ဖူးမြှော် ဆုတောင်းကြမယ် 🙏🙏
✴Pino Latte ဆိုတဲ့ coffee ဆိုင်လေးကို ရောက်ပီဆိုရင်တော့ မျက်စိတဆုံးမြင်နေရတဲ့ တောင်တန်းတွေရဲ့ ရှုခင်းရယ် သဘာဝရဲ့အလှတရားတွေရယ်ကို ခံစားရင်း လောကကြီးရဲ့ အနှစ်အရသာကို ခံစာကြဦးမယ်နော် 😉
(အရမ်းလှတဲ့ ဒီနေရာလေးမှာ ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေ အမိအရ ရိုက်ယူခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်)😂😂
✴ရာသီဥတု သာယာရင်တော့ဖြင့် ပင်လယ်မိုးတိမ်တွေ မှာ လက်ပစ် မကူးခက်နိုင်ပေမယ့် တိမ်တိုက်တွေပေါ် ခေတ္တအလည်ရောက်နေသလို ခံစားသွားရစေမယ့် View Point ကိုလဲ သွားရောက်ကြဦးမယ် 😱😱
✴ဂေါ်ဖီထုတ် လွင်ပြင်ကျယ်ကြီးကိုကော မကြည့်ချင်ဘူးလား ? တောင်ခြေကနေ တောင်ထိပ်ထိ မျက်စိတဆုံး စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဂေါ်ဖီထုတ်ကြီးတွေပါ နေရာအနှံတွေ့ရပါအုံးမယ်နော်..
ကဲ သွားမယ့်နေရာလေးတွေကို ကြည့်ရုံနဲ့ ဗဟုသုတရဖွယ် မြင်ကွင်းအသစ်သစ်တွေနဲ့ ကြိုဆိုနေမယ့် ဒီခရီးစဉ်လေးကို လိုက်ပါခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်….🤗🤗
✌ဒေသခံအစားအစာများနှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမယ့် မနက်စာ ၁ နပ် ၊ ညစာ ၁ နပ်
✌ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် air-con Bus ကား ကြီး၀န်ဆောင်မှု 🚌🚎🚌
รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ဘန်ကောက်ခရီးသွာ ဝန်ဆောင်မှု ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา
ส่งข้อความของคุณถึง ဘန်ကောက်ခရီးသွာ ဝန်ဆောင်မှု :
ချစ်သောမိတ်ဆွေများ အထူး အစီစဉ် ယနေ့မှ ၃ လပိုင်း တစ် လ လုံးလုံးကို ဘယ်သွားသွား ကားခ တစ်ရက်ကို 500 ဘတ် လျှော့ချပေးလိုက်ပြီး ၃၁-၃-၂၀၂၀ တွင်းချပေးသွားမှာပါရှင်👌👌 ယခင်က 1-4 pax နှင့် 1-12 pax စျေးများကို ယခုအခါ Car full day ယူပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာနေရာတွေကို စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ သွားလည်ကြပါစို့... ( အော်...ဒါပေမဲ့ သွားလည်မဲ့နေရာလေးတွေကိုတော့ ကြိုရှာထားနော်) ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ဘန်ကောက်ရောက်တိုင်း ကျွန်မတို့ Ohnmar Travels & Tours ဆီကဘဲ Car Rental ကော Guide service ကော အမြဲလိုလို ငှားဖြစ်ကြတဲ့ ဧည့်သည်တော်များနှင့် တခြားမိတ်သစ်များအတွက် စျေးနှုန်း (1) ဘန်ကောက်မြို့တွင်း ( 8AM to 8PM ) 1-4 ယောက်စီး 2500 Baht 5-12 ယောက်စီး 2800 Baht (2) ဘန်ကောက် - ပတ္တရား ( 8AM to 8PM ) 1-4 ယောက်စီး 3000 Baht 5-12 ယောက်စီး 3500 Baht (3) ဘန်ကောက်-အယုဒ္ဓယ ( 8AM to 8PM ) 1-4 ယောက်စီး 3000 Baht 5-12 ယောက်စီး 3500 Baht (4) ဘန်ကောက်-ဟွာဟင် (8AM to 8PM) 1-4 ယောက်စီး 4000 Baht 5-12 ယောက်စီး 4500 Baht (5) ဘန်ကောက်-ကန်ချနာဘူရီ (8AM to 8PM ) 1-4 ယောက်စီး 4000 Baht 5-12 ယောက်စီး 4500 Baht (6) ဘန်ကောက်-ခေါင်ရိုင် (8AM to 8PM ) 1-4 ယောက်စီး 4000 Baht 5-12 ယောက်စီး 4500 Baht (7) လေဆိပ်ကြိုပို့ 1-4 ယောက်စီး 800 Baht 5-12 ယောက်စီး 1000 Baht ဧည့်လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုကတော့ တစ်ရက်ကို ဘန်ကောက်မြို့တွင်း မြို့ပြင် ဘတ်1200ပါနော်…🗣🗣 အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါပီ🙋♀️🙋♂️ 🙏ohnmar Travels & Tours မှ နောက်ထပ်ရရှိနိုင်သော Services များမှာ........... ☘️Packages ၊ Group Tours ၊ Joint Tours များစီစဉ်ပေးခြင်း ☘️Air Ticket လေကြောင်းလိုင်းများ ☘️ကားစင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှု (Saloon မှ 45 Seater Bus အထိရ နိုင်ပါသည်) ☘️လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းများအတွက်စကားပြန်လုပ်ပေးခြင်း ☘️Tour Guide သီးသန့်စီစဉ်ပေးခြင်း ☘️ကစားကွင်းနှင့် အပန်းဖြေဥယျာဉ်များရှိုးပွဲလက်မှတ်များနှင့် ☘️Dinner လက်မှတ်များသီးသန့် ရောင်းချပေးခြင်း ☘️လူကြီးမင်းတို့သွားရောက်လည်ပတ်လိုသည့်နေရာများအလိုက် ခရီးစဉ်များရေးဆွဲ၍စီစဉ်ပေးခြင်း ☘️နေ့စဉ် နေ့ချင်းပြန်ခရီးစဉ်များ ၊ တစ်ညအိပ်ခရီးစဉ်များ ပြေး ဆွဲပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို အသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီရှင့် .Ohnmar Travels & Tours Co.,Ltd ✔✔Myanmar ph
Zawgyi ျဖင့္ေအာက္သို႔ဆင္းၿပီးဖတ္ေပး ပါရွင္😍😍😍 YGN- Bkk- Kanchanaburi – Hua Hin -YGN ( 3Night- 4Days ) ကဲ ဒီနှစ် တူးပို့ တူးပို့ သင်္ကြန်ကို ဘယ်နေရာတွေမှာ သင်္ကြန်ကျဖို့ စိတ်ကူးထားသလဲ? ပတ္တယား၊ ဖူးခက်နဲ့ ဘန်ကောက် စတဲ့နေရာတွေမှာသင်္ကြန်ပျော်ရတာ ငြီးငွေ့နေကြပီလား? ကဲ အဲလိုဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားအောင် မော်ဒိုက်နဲ့တူတဲ့ Kanchanaburi မြို့လေးမှာ တစ်ခမ်းတစ်နား သင်္ကြန်အတူတူကျဖို့ Ohnmar travel မှလက်တို့ပီး ပြောပါရစေရှင့်…. ဒီခရီးစဉ်လေးက ခရီးစဉ်လဲစုံ စျေးနှုန်းကချိုသာပီး သွားလည်မဲ့ နေရာတွေကလည်း လတ်တလောရေပန်းစားပြီး Popular ဖြစ်တဲ့ အထင်ကရနေရာတွေကို ပို့ပေးသွားမှာမို့ တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ အခုဘဲ Ohnmar Travel နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပါနော် ဘန်ကောက်- ကန်ချနဘူရီ -ဟွာဟင် 👌( ၃ညအိပ်- ၄ရက် )👌 တစ်ဦးလျင် - 💥 490 USD💥 ( လေယာဉ်မှတ် အသွားအပြန် ကီလို ၂၀ သယ်ဆောင်ခွင့် ပါ၀င်ပြီးသားပါရှင့် ) ✈✈✈ 🙏ထွက်ခွာမည့်ရက် 10 April 2020 to 13 April 2020🙏 ဘယ်နေရာတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြမလဲ?????👈👈👈 သွားရောက်လည်ပတ်မဲ့ နေရာတွေကတော့ 👇👇👇👇👇 📸 ထိုင်းနိုင်ငံရောက်လျင် မဖြစ်မနေ ဖူးမြော်သင့်သည့် တန်ခိုးကြီးဘုရားဖြစ်သည့် မြဘုရားနှင့် Grand Palace🙏 📸 အထပ်ပေါင်း 84-ထပ်ရှိသည့် Baiyoke Sky တွင် Buffet Dinner သုံးဆောင်ပြီး ဘန်ကောက်တစ်မြို့လုံး၏ ညအလှအပကို ခံစားကြည့်ရှုရင်း ဓာတ်ဖမ်းကြမယ် 📸 မော်ဒိုက်နဲ့တူတဲ့ Anada Resort ရေပေါ်ဟိုတယ်မှာ ရေကစားနည်းပေါင်း ၃၃-မျိုးတို့ကို စိတ်ကြိုက် ကစားပြီး ကနူးလှေလှော်ခြင်း၊ ဝါးဖောင်စီးခြင်း စသည့် Water Activities များစွာကို ပြုလုပ်ပြီး Water Festival လေး ကျင်းပကြမယ်…. 📸 ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ရှေးဟောင်းအမွေ အနှစ် တောင်ပေါ်ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည့် Wat Thamsu Buddha နှင့် တောင်ပေါ် Viewpoint လေးကို နောက်ခံထားကာ အလှဆုံး ဓာတ်ဖမ်းကြမယ်……………… 📸 ဒါ့အပြင်ဘာလီသို့ ရောက်ရှိသွားသလို ခေတ်မီဆန်းသစ် သောစိတ်ကူး များဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Bird Nest ပုခက်များ နဲ့ စိတ်ကြိုက်ရိုက်ကူးနိုင်ရန် U & ME Coffee Shop သို့ Coffee သောက်ရင်း စိတ်ကြိုက် ဓာတ်ဖမ်း ကြမယ် နော် 📸ပြီးတေ့ာ ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မင်းသား ကြီး ရမ်ဘို ပါ၀င်ရိုက်ကူးခဲ့သော The Bridge on the River Kwai & Railway Station သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြမယ်………… 🏖ပင်ပန်းသမျှတွေ ယူပစ်သလို ပျောက်သွားစေမဲ့ Hua Hin Beach 🛶အီတလ
ဟွာဟင်မြို့ရဲ့ တစ်ရက်ထဲ5နေရာ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ ​အစီစဉ်လေးပါ ဖွင့်ကြည့်ပါနော 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Ohnmar Travel ရဲ့Bangkok-Pattaya-Hua Hin(3N-4D) ခရီးစဉ်တွင် မဲဖောက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်မှ ကံထူးရှင်များဖြစ်ကြသော ဦးသောင်းထွန်းနှင့် ဦးစန်းမျိုးတို့အား အထူးကျေးဇူးတင်ပာတယ်ရှင်
ချင်းမိုင် မီးပုံ ပျံ ပွဲတော်ကြီး🎈🎈🎈
ချင်းမိုင် မီးပုံ ပျံ ပွဲတော်ကြီး
ဒါၾကေတာ့ ဟင္းခါးရည္ ေပါင္းစံု ႏွစ္မ်ိဳးသံုးမ်ိဳးေပါင္းထည့္ၿပီး မွာ စားလို႔လည္းရတယ္ေနာ😃😃
ဒါကေတာ့ အႀကိဳက္စားေနတဲ့ စားသံုးသူတေယာက္ပံုပါ😂😂
Safari world မွာရွိတဲ့ Dolphin Show ဒီေန႔ ကမ႓ာမွာ အႀကီးဆံုး Dolphin အႀကီးစား ကိုျပမွာမို႔ ႐ိုက္ျပတာပါ😘😘😘
ဒါက ကၽြန္းတကၽြန္း နဲ႔ တကၽြန္းလည္ပတ္ေနတဲ့ ျဗဴးပါ Video ဖိုင္ေလးပါ